८ करोड खर्चेर ओलीको तस्बिर पोलदेखि पत्रिकासम्म, राज्यबाटै मजदुरको कोष दोहन ! « GDP Nepal
८ करोड खर्चेर ओलीको तस्बिर पोलदेखि पत्रिकासम्म, राज्यबाटै मजदुरको कोष दोहन !
Published On : 26 November, 2018 10:22 pm
काठमाडौं । सरकारले मंगलबारदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्दैछ । तर, यसको तामझामका लागि यसअघि मजदुरको कोषमा जम्मा भएको २० अर्ब रुपैयाँबाटै करिब ८ अर्ब खर्चिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तस्बिरसहित एउटा युगको सुरुवात भन्ने नारासहित काठमाडौंका धेरै बिजुली पोलमा ब्यानर टाँगिएका छन् भने सबैजसो अनलाइन र पत्रपत्रिकामा ज्याकेट एड प्रकाशित प्रशारित भएका छन् । टिभी र रेडियोमा पनि विज्ञापन गरिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसको प्रचारप्रसारका लागिमात्र ८ करोड रुपैयाँ खर्चेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा संसदबाट पारित भए पनि ओली सरकारले यसलाई आफ्नो सफलताका रुपमा व्याख्या गरेको पाइएको छ ।
पत्रपत्रिकामा भने ओलीसहित दोस्रो पेजमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले समेत आफ्नो प्रचार गरेका छन् ।
नेपालका सबै संगठित क्षेत्रका मजदुरले १० वर्षदेखि प्रत्येक महिना १ प्रतिशतका दरले जम्मा गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म जम्मा भएको २० अर्ब रुपैयाँ यो सरकारले यसरी फजुल खर्च र आत्मप्रशंशामा खर्च गरेर चरम दुरुपयोग गरेको छ ।